PressReader - Ilanga: 2018-11-08 - Kukukhumbuza ekhaya ukudla kwaseBig Easy
Kukukhumbuza ekhaya ukudla kwaseBig Easy
Ilanga - 2018-11-08 - Ezesimanje -
KAYIKHO into ekitaza umuntu okhonze ukudla okusezingeni eliphezulu njengomzuzu wokubekwa kwe- menu phambi kwakhe.
Ungiphindile lowo muzwa ngesikhathi ngimenywe eBig Easy Restaurant, eHilton Hotel, eThekwini nabanye ozakwethu esihlale siconsa nabo amathe abangamafoodie, kuyokwethulwa i-head chef yabo uNoel Kanyemba.
Bekungekhona okokuqala ngivakashela le restaurant. Okuhlale kungihlaba umxhwele ngayo wumgomo wabo wokuqhakambisa ukudla okwejwayelekile futhi okukukhumbuza ekhaya kodwa okunongwe ngendlela ezokushiya ufisa impinda njenge- lamb shank, yibunny chow noma yipapa noshatini ( pap and tomato relish). Kubathandi benyama, akhona nama- platter e- game (okuwuhlobo lwenyama yezilwane zasendle) nawenyama eyosiwe. Imvamisa ukudla kwaseBig Easy kuhlale kuhambisana nengilazi yezinhlobo zamawayini e-Ernie Els, esungulwe ngumdlali odumile wegalofu wakuleli, u-Ernie Els. Ngale kwalokho kunendlela emnene abakwa- mukela ngayo
kanti nodado nabo kababakhohlwanga ngoba ikhona i- menu efanele bona.
Yiyona futhi le ndlela eyenze waheleza ngamandla umoya wasengadini ebesilinde kuyona kuleli hhotela ngesikhathi sekungena usingaye, uNoel, ngakhumbula ingoma edlisayo kulezi zinsuku enamagama athi: “Kuthi huuuu”. Ungene kwezwakala, kanti wonke amehlo evele athi njo kuyena ngesikhathi enza adume ngazo bukhoma.
Ezidlweni asinambithise zona kwi- starter, bekuyizinhlobo ezimbili. Eyokuqala beyididiyele i- smoked wayfarer trout salad with fennel and orange remoulade, yiavocado mousse, yi-honey shallot dressing ne-roasted beetroot.
Kweyesibili kulandele i- glazed chie cheese ehambisana ne- mixed salad, yiorange marinated cucumber enongwe nge- balsamic granola. Kofishi bekuyi- kingklip ehambisana nama- cherry tomatoes, yi- red onion ne- hollandaise sauce.
Kangisiyena umuntu wama- starter kakhulu, izihlathi zihlehla uma sekuza i- main course, okuyiyona engingathi uNoel uthole amaphuzu amaningi kuyona, aqhamuka kimina.
Lapha bekuyi- dukkah-crusted ostrich fillet ephelezelwa yi- roasted parmesan crisps, ama- patti pans, yi- venison biltong (ngiyazifela nge- biltong), ama- baby onions ahambisana nengxubevange ye- parmesan and parsnip puree and blackberry jus. Nawe ubungeke usinike esingaboni.
Cha, noma kungathiwa usuthi kanjani kodwa sihlale sikhona isikhala se- dessert ukupholisa isisu. Hheyi! Akuve kunzima ukufunda i- menu edle ngama-gama aqinile ongawaqondi ukuthi athini nokuthi sidlo sini okumele usilindele. Kungenzile kule- menu yedessert kodwa okuhle wukuthi usuku nosuku ufunda izinhlobo ezintsha zokudla.
I- Dessert kaNoel bekuyi- orange pannacotta enongwe nge- pistachio barfi crumbs ne- almond tuile. Ukuchaza nje kalula, cabanga u- jelly. Nayo iyabikizela njengo- jelly kodwa yona ihlukile kancane indlela enongwe ngayo.
Engingakusho ngokudla kukaNoel wukuthi kakugcini ngokunambitheka kahle kuphela kodwa nangendlela akuhlobisa ngayo epuletini nephunga lakho elihehayo uze wenqene nokukudla.
* Le reastaurant ingeyomdlali odumile kwezegalofu, u-Ernie Els. Kunelinye igatsha layo eliseStellenbosch, eWestern Cape elakhiwe kwi- wine farm yayo le ngqwele kwezegalofu. ayandab@ilanganews.co.za
YI-STARTER se-smoked wayfarer trout salad enongwe nge-fennel ne-orange remoulade.
UNoel Kanyemba oyi-head chef yase-restaurant iBig Easy, eseHilton Hotel, eThekwini.